ဣဇာက်သည် | | Arduino, ယေဘုယျ
သငျသညျဖြစ်ကောင်းအစဉ်အဆက်ကြားဖူးတယ် နာမ်ဤစီမံကိန်းကိုရောမသမ္မတနိုင်ငံမှနိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး နှင့်စစ်တပ်၏အမည်ဖြင့်နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်သင်ဤဆောင်းပါးသို့သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုရှာဖွေလို။ သင်သိပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုလိုသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဖြစ်နိုင်ရင်ငါပေးမယ်ငါကြိုးစားမယ် သော့ Espurino ဆိုတာဘာလဲ၊ သင်၏အနာဂတ်စီမံကိန်းများအတွက်သင့်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မည်၊ ၎င်းကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်မည်သို့ပရိုဂရမ်ရေးသားရန်လေ့လာရန်အကြံပြုချက်များအကြောင်း။
ခဏကြာမှမင်းတို့ကိုမင်းကိုပြောခဲ့တယ် Anaconda အကြောင်းလိုချင်သော Python ချစ်သူများအတွက်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစီမံကိန်းတစ်ခု အစီအစဉ် arduino ပျဉ်ပြား အလွန်ရေပန်းစားလာတဲ့ဒီပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားနဲ့။ အဲဒီလိုလုပ်တာနဲ့ဆင်တူတဲ့အရာ မိုက်ခရို, ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Espurino နဲ့အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုသုံးပြီးနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းအသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူလာပါပြီ ...
1 Espurino ဆိုတာဘာလဲ
2 တရားဝင် Espurino ပြား
Espurino စီမံကိန်းကိုဖန်တီးခဲ့သည် 2012 ခုနှစ်တွင်ဂေါ်ဒွန်ဝီလျံအမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် microcontroller များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အစပိုင်း၌၎င်းသည် open source မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် STM32 MCU များအတွက်အခမဲ့ firmware ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရုံသာဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စီမံကိန်းသည်ဖြစ်လာရန်အလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းခဲ့သည် open source ဖြစ်ပြီး အလွန်အောင်မြင်သောရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအပြီးတွင် Kickstarter ကရန်ပုံငွေအဖွဲ့။ ဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဟာဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့်ဘုတ်အဖွဲ့တွေထုတ်လုပ်ဖို့ရန်ပုံငွေရှာဖို့ကန ဦး ဖွံ့ဖြိုးရေးပတ်ဝန်းကျင်ထက်ကျော်လွန်သွားတယ်။
Espurino ၏ firmware ကိုယခု Mozilla Public License 2.0 အောက်တွင်လိုင်စင်ရရှိထားပြီးနမူနာကုဒ်များသည် MIT လိုင်စင်၊ Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 အောက်ရှိစာရွက်စာတမ်းများနှင့်နောက်ကွယ်ရှိ hardware ဒီဇိုင်းဖိုင်များလည်းပါ ၀ င်သည်။
ဒါကဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် Espurino တရားဝင်တံဆိပ်Arduino ကဲ့သို့သောအခြားအလားတူစီမံကိန်းများကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းအခြားမူကွဲများမြောက်မြားစွာဖြင့်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းပျဉ်ပြားများသည်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် DIYers များအတွက်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စွမ်းရည်များပေးသော Arduino-လိုက်ဖက်သောဒိုင်းများနှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိသည်။
လတ်တလောတွင်စီမံကိန်းတွင်လူကြိုက်များမှုအချို့ရှိပြီးအရေးကြီးသောနေရာတွင်ရှိသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိုင်းအဝိုင်း အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်သင်ခန်းစာများစွာနှင့်အကူအညီများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် JS နှင့် programming microcontroller များကိုသင်နှစ်သက်လျှင်၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။
စီမံကိန်းအရင်းအမြစ်ကုဒ် - GitHub
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - နာမ်
Firmware - ဒေါင်းလုပ် (ကွဲပြားခြားနားသောပြားများအတွက်)
Un မိုက်ခရိုMCU (Micro Controller Unit) ဟုလည်းခေါ်သည့်အရာသည်မှတ်ဉာဏ်မှအမိန့်အချို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ပရိုဂရမ်မာချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် CPU ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်လည်းကိုက်ညီနိုင်သည်၊ သို့သော် MCU တစ်ခုတွင်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့် embedded devices များကဲ့သို့သောအချို့သောတိကျသောအလုပ်များကိုပစ်မှတ်ထားပြီးပိုမိုအားနည်းပြီးအားနည်းနေသည်။
ဖြည့်စွက်ကာ CPU နဲ့ကွာခြားချက်microcontroller သည်ပေါင်းစပ်ထားသော circuit တစ်ခုဖြစ်ပြီး memory နှင့် I / O system ကဲ့သို့သောအခြားအလုပ်လုပ်သောလုပ်ကွက်များအပြင် CPU ကိုယ်နှိုက်လည်းပါ ၀ င်သည်။ ဆိုလိုတာကအဲဒါကအခြေခံအားဖြင့်ချစ်ပ်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပြည့်စုံတဲ့ကွန်ပျူတာပဲ ...
ထို့ကြောင့်၊ သင်၌စျေးပေါ။ ရိုးရိုးစက်ရှိသည် မင်းအစီအစဉ်ချနိုင်တယ် ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သွင်းအားစုများနှင့်ရလဒ်များသည်သင်လိုချင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပြီးလုပ်ရပ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြင်ပအာရုံခံကိရိယာများမှသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပြီး၊ ၎င်းပေါ် မူတည်၍ ၄ င်း၏ output များမှတဆင့်အခြားသူများသို့အချက်ပြမှုများကိုပေးပို့နိုင်သည် အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ ချိတ်ဆက်
စကားမစပ်များအတွက် Espurino IDE နှင့်စတင်ပါသင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်တွင်ဘာတစ်ခုမှတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဝဘ်အခြေပြုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည် ဒီမှာက သင်အကြိုက်ဆုံးဝဘ်ဘရောက်ဇာ၌။
ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်သော်လည်းဤဘုတ်များ၏ firmware ကို flash လုပ်ရန် Chrome နှင့် Espurino Web IDE ဟုခေါ်သော plugin ကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအကြံပြုပြီးသင်၏ Chrome ကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ဒီ link ကို.
ငါရည်ညွှန်းတယ် အဆိုပါဗီဒီယိုဂိမ်းများ JS အပါအ ၀ င်အချို့သော programming language များဖြင့်ပရိုဂရမ်ရေးရန်သင်ကကူညီသည်။ ဤဂိမ်းများဖြင့်ဇာတ်ကောင်ကိုညွှန်ကြားရန်သို့မဟုတ် virtual ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ကီးဘုတ်သို့မဟုတ်မောက်စ်ကိုသုံးမည့်အစား၊ သင်၌ရှိလိမ့်မည်မှာမျက်နှာပြင်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိစကားပြေနှင့်စကားဝှက်ကိုစတင်ထည့်မည့်နေရာဖြစ်သည်။ အရိုးရှင်းဆုံးပင်အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်) ။
ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်ဂိမ်းကိုပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကား သုံး၍ ထိန်းချုပ်လိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ဂိမ်းကစားချိန်အတွင်းသင်သွားလိမ့်မည် အဲဒါကိုမသိဘဲနီးပါးသင်ယူခြင်း နှင့်သင်မစ်ရှင်အတွက်တိုးတက်သကဲ့သို့သင်တို့အသိပညာတိုးပွားလိမ့်မယ်။
တရားဝင် Espurino ပြား
၏ပထမ ဦး ဆုံးဖှံ့ဖွိုးတိုးတပြီးနောက် ပန်းကန်ပြား Espurino ၏မူရင်းသည် IDE နှင့် JS တို့တွင်အသုံးပြုရန်ပိုမိုသောစီမံကိန်းများဖြစ်သည်။ သင်သည်ထိုသူတို့အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
Espurino (မူရင်း)ဤစီမံကိန်းအောက်တွင်ပထမဆုံးဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သောမူလပန်းကန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့လက္ခဏာများမှာ
flash မှတ်ဉာဏ်၏ 256Kb, RAM ၏ 28Kb
microUSB, SD connector နှင့် JST PHR-2 ပြင်ပဘက်ထရီဆက်သွယ်မှု
အနီရောင်၊ အပြာနှင့်အစိမ်းရောင် LEDs
Bluetooth modules HC-05 ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသော Pads
44 PWM, 26 ADC, 16 UARTS, SPI 3,2I2C နှင့်2DAC ပါသော2GPIO ။
Spurino Peak: သင်၏ပရောဂျက်များကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းစတင်ပြီးထိန်းချုပ်ရန် microcontroller ပါသောဘုတ်ပြားလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Espurino IDE အကြောင်းရေးသားထားသော script ကို၎င်း၏ USB interface မှတစ်ဆင့် program လုပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စျေးသက်သာပြီး၎င်းကို၎င်းခေါင်းများပေါ်ရှိဂဟေတံနှင့်မပါစေဘဲသင်နှင့်တွေ့နိုင်သည်။ အသေးစိတ်:
22 GPIO (9 analog input, 21 PWM,2serial,3SPI နှင့်3I2C) ။
ဘုတ်ပေါ်ရှိ USB-A connector
2 LEDs နှင့် PCB ရှိ 1 ခလုတ်တစ်ခု။
Memory: 384 Kb flash နှင့် 96Kb RAM
Spurino WiFiဖြေ။ ။ အရင်ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့လက်တွေ့ဘုတ်အဖွဲ့နှစ်ခုပဲ၊ တိုးတက်မှုတချို့ထပ်တိုးလိုက်တာပဲ။ ဥပမာအားဖြင့်အရွယ်အစားမှာ ၃၀x ၂၃ မီလီမီတာဖြစ်ပြီး ESP30 WiFi ချစ်ပ်အတွက်နေရာရလာသည်။ ထို့အပြင် USB ကို microUSB အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ GPIO အရေအတွက် ၂၁ ခု (analog 23, 8266 PWM, 21 serial, 8 SPI နှင့် 20 I1C) သို့လျှော့ချခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် microcontroller ကိုလည်းတိုးမြှင့်ထားသည်။ ယခုအခါ STM3F3CEU2 32-bit 411Mhz ARM Cortex-M6 သည် 32kb flash memory နှင့် 100 kb RAM ဖြစ်သည်။
Spurino Puck.jsဖြေ - အခြေခံအားဖြင့်တော့ Bluetooth စမတ်ခလုတ်တခုဖြစ်တယ်၊ အဲဒါက ၄ င်း၏ internal microcontroller နဲ့ JS ပါတဲ့စကားပြန် (ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားတဲ့) ကြောင့်သင့်ကိုပရိုဂရမ်ဆွဲနိုင်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် 52832MHz ARM Cortex-M4 nRF64 SoC ရှိပြီး 64KB RAM နှင့် 512Kb flash, GPIO, NFC tag, MAG3110 magnetometer, IR transmitter၊ built-in thermometer အပြင်အလင်းနှင့်ဘက်ထရီအဆင့်အာရုံခံကိရိယာများရှိသည်။
Spurino Pixl.jsဖြေ - အရင်ဖုန်းတွေနဲ့ဆင်တူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ခလုတ်တစ်ခုအစားပရိုဂရမ်လုပ်နိုင်တဲ့ Bluetooth LE စမတ်မျက်နှာပြင်ဖြစ်တယ်။ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်သည် 128x 64 monochrome အရွယ်အစားရှိပြီးကျန်သောလက္ခဏာများမှာ Puck.js.
MDBT42Q: ၎င်းသည် Pixl.js နှင့် Puck.js ကဲ့သို့တူညီသော module တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကြွေအင်တာနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများသည်ယခင် ၂ ခုနှင့်တိုက်ဆိုင်သော်လည်းဤကိစ္စတွင်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ခလုတ်မပါဘဲ ...
သင်လိုအပ်ခဲ့လျှင် ဝယ်ပါ ဤအ Espurino ပြားများထဲမှသူတို့ကိုသင်၌ရှာတွေ့နိုင်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒီစီမံကိန်းကနေ။ သငျသညျကိုလည်းတစ်စီးရီးမှတဆင့်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဖြန့်ဖြူးသူ Adafruit ကဲ့သို့နာမည်ကြီးကုန်စုံဆိုင်များကဲ့သို့သောစီမံကိန်းအတွက်တာဝန်ပေးအပ်ထားသောအရာရှိများ။
CAD - ကွန်ပျူတာအထောက်အပံ့ဒီဇိုင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲအကြောင်းပါ